Obi wu na wɔanhu nea okum no a, nea wɔbɛyɛ (1-9)
Akwankyerɛ a ɛfa mfenaa aware ho (10-14)
Abakan kyɛfa (15-17)
Ɔba a ɔyɛ otuatewfo (18-21)
Wɔsɛn obi wɔ dua so a, nnome wɔ no so (22, 23)
21 “Sɛ wokɔtena asaase a Yehowa wo Nyankopɔn de rema wo no so na sɛ wokɔto sɛ wɔakum obi ato wuram, na obiara nnim nea okum no a, 2 wo kurom mpanyimfo ne atemmufo+ nkosusuw mfi faako a nea wawu no da no nkɔ nkurow a ɛbemmɛn hɔ no. 3 Mpanyimfo a wɔwɔ kurow a ɛbɛn nea wawu no paa mfa nantwi ba a ɔnyɛɛ adwuma da na wɔmfaa kɔndua ntoo no so da mmra. 4 Kurow no mu mpanyimfo no mfa nantwi ba no nkɔ subon a nsu resen wom mu, baabi a wɔnnɔw da na wonnuaa hwee wɔ hɔ da. Afei wommu nantwi ba no kɔn mu wɔ subon no mu.+ 5 “Lewifo a wɔyɛ asɔfo no mmra hɔ efisɛ wɔn na Yehowa wo Nyankopɔn ayi wɔn sɛ wɔnsom+ no na wɔmfa Yehowa din nhyira nkurɔfo.+ Sɛ obi tow hyɛ ne yɔnko so anaa awudisɛm bi sɔre a, wɔn anom asɛm so na wobegyina abua asɛm no.+ 6 Afei mpanyimfo a wɔwɔ kurow a ɛbɛn nea wawu no mu nyinaa mmra, na wɔnhohoro wɔn nsa+ ngu nantwi ba a wɔabu ne kɔn mu wɔ subon no mu no so, 7 na wɔnka sɛ, ‘Ɛnyɛ yɛn nsa na ehwiee mogya yi gui, na yɛamfa yɛn ani nso anhu sɛ obi reyɛ saa. 8 O Yehowa, mmu wo man Israel a woagye wɔn+ no fɔ wɔ asɛm yi mu, na mma mogya a edi bem ho asodi nntena wo man Israel mu.’+ Wɔyɛ saa a, ɛnde wɔremfa mogya ho asodi nto wɔn so. 9 Ɛno bɛma woayɛ nea ɛsɔ Yehowa ani na woayi mogya a edi bem ho asodi afi wo mu. 10 “Sɛ wo ne w’atamfo kɔko na Yehowa wo Nyankopɔn ma wudi wɔn so nkonim na wode wɔn yɛ nkoa,+ 11 na wuhu ɔbea bi wɔ nkoa no mu a ne ho yɛ fɛ, na w’ani gye ne ho na wopɛ sɛ woware no a, 12 wubetumi de no akɔ wo fi. Afei ma onyi ne ti nwi, ommubu ne mmɔwerɛw,* 13 onyi n’ataade a ɔde baa nkoasom mu no, na ɔntena wo fi nsu ne papa ne ne maame bosome baako.+ Sɛ owie a, wo ne no nna; wobɛyɛ ne kunu na ɔno nso bɛyɛ wo yere. 14 Na sɛ w’ani nnye ne ho a, gyaa no ma ɔnkɔ+ baabiara a ɔpɛ.* Woabrɛ no ase, enti hwɛ na woantɔn no anaa woanyɛ no basabasa. 15 “Sɛ ɔbarima bi wɔ yerenom baanu na ɔdɔ baako sen baako,* na sɛ ɔne mmea baanu no nyinaa wo mmarima, na nea ɔnnɔ no kɛse no ba ne ɔpanyin a,+ 16 ɛnde da a ɔbɛkyɛ n’agyapade ama ne mma no, ɔrentumi nsian nea ɔnnɔ no kɛse no ba a ɔyɛ ɔpanyin no ho mfa abakan kyɛfa no mma nea ɔdɔ no no ba no. 17 Nea ɔnnɔ no kɛse no ba no, ɔno na ɛsɛ sɛ obu no sɛ abakan, na sɛ ɔkyɛ n’agyapade a, ɛsɛ sɛ ɔma no kyɛfa* abien. Efisɛ ɔno ne n’ahoɔden mfiase. Abakan dibea yɛ ne dea.+ 18 “Sɛ ɔbarima bi wɔ ɔba otuatewfo a n’aso yɛ den, na sɛ ontie ne papa ne ne maame asɛm,+ na wotu no fo na ontie a,+ 19 ɛnde ne papa ne ne maame mfa no mmra ne kurom mpanyimfo anim wɔ kurow no pon ano, 20 na wɔnka nkyerɛ ne kurom mpanyimfo sɛ, ‘Yɛn ba yi yɛ otuatewfo a n’aso yɛ den na ontie yɛn asɛm. Ɔyɛ odidifo*+ ne ɔsabofo.’+ 21 Afei ne kurom mmarima nyinaa nsiw no abo mma onwu. Monyɛ saa mfa nyi adebɔne no mfi mo mu na Israelfo nyinaa nte na wonsuro.+ 22 “Sɛ ɔbarima bi yɛ bɔne na ɔfata owu, na mukum+ no de no sɛn dua so a,+ 23 mommma n’amu nnsɛn dua no so mmma ade nnkye so.+ Monhwɛ nsie no da no ara efisɛ obiara a wɔasɛn no dua so no, Onyankopɔn nnome wɔ no so;+ mommma efĩ nnka asaase a Yehowa mo Nyankopɔn de ama mo sɛ agyapade no.+
^ Anaa “ɔmmma ne mmɔwerɛw mmfuw.”
^ Anaa “baabiara a ne kra pɛ.”
^ Nt., “ɔdɔ baako tan baako.”
^ Anaa “abupɛn.”
^ Anaa “obi a odidi boro so.”